CABS: Sesimise Ukupha Abasakhulayo Izikhwelede Esikhwameni seYouth Fund
Ntulikazi 03, 2014
Umqondisi webhanga leCABS umnumzana Kevin Terry utshele idale lephalamende ukuthi ibhanga lakhe selimisile umsebenzi wokukhweledisa abasakhulayo phansi kwesikhwama sezigidi ezilitshumi zamadollar -$10-million ese Old Mutual Kurera-Ukondla Youth ngoba isilinganiso sabangamatshumi athoba minwembili- 80% abakhweledayo lokhe bengakaqalisi ukubhadala.
UTerry utshele ikhomidi yedale lephalamende ebona ngenhlelo zentuthuko ukuthi uhlelo lolu kaluhambi kuhle ngakhoke sokudingeka amanye amacebo wokuthi singaphathwa njani lesi sikhwama okuzakwenza abakhweledayo benelise ukuqhuba inhlelo ezizabalethela inzuzo ukuze babisele lapho abayabe bethethe khona ukwenzela ukuphathisa abanye njalo abasakhulayo.
Uqhubeke ethi kube labasakhulayo abafika inkulungwane ezingamatshumi amabili lambili abalobele ukucela ukukhweleda imali yalesi sikhwama kusukisela ngomnyaka ka2012. Phakathi kwaleli nani phose abazinkulungwane ezine-3,600 yibo abaphiwayo izikhwelede ezibiza izigidi ezinhlanu zamadollar-$5million.
Phakathi kwaleyo mali izigidi ezedlula kancane ezine zamadollar-$4.2 million lokhe ingakabuyiselwa khona sokwedlule iminyaka emibili abatsha laba banikwa izikwelede sokudalela abanye ubunzima abadinga ukuthola limali.
UTerry uthi ibhanga leCABS lizabanjwa ngamandla ukuthengisa isilinganiso sokubili lengxenye ekhulwini-2,5% samashare alo kunkampani yamaInsurance eye Old Mutual, ngoba imali eyasetshenziswa ukukweledisa abasakhulayo laba ingeyabantu abalondoloza imali zabo kilo.
ICABS esebenzelana le Old Mutual ukuqondisa inhlelo zalesi sikhwama seYouth Fund, ithi isikubone kufanele ukuthi ike ime ukuthatha ezinye izicelo andubana kuphunywe lamacebo angaphathisa ukuthi uhlelo luphumelele njalo kudalwe imisebenzi yokuziphilisa kubontanga.
Umqondisi webhanga leCBZ umnumzana Never Nemuyedzo ngaphambilini ubikwa eke watshela ikhomidi yinye yedale lephalamende ukuthi abangabiseli lezi zikhwelede bayisilinganiso sokungamatshumi amane lanhlanu ekhulwini- 45% inengi kungabasakhulayo abalethwa lugatsha lukahulumende lwabasakhulayo. Ethi ngoba labo abeza beqondane lebhanga baqala bahlolisiswa kabanzi ukuze babonakale ukuthi bangayinikwa limali bazakwenelisa na ukuyibuyisela.
Abe CBZ labo bakhona kulolu hlwelo lwesikhwama sokukhweledisa abatsha njalo kusukisela sasungulwayo sebekhweledise ontanga imali engangezigidi ezintathu zamadollar-$3million.
Abekhomidi yedale lephalamende ebona ngenhlelo zentuthuko bathi abamabhanga bonke abakulolu hlelo lwesikhwama sabatsha bayavumelana bonke ukuthi kunzima ukuthola izimali zabo kwabasakhulayo ababakhweledisayo.
Uhulumende ulezivumelwano ezithile lamabhanga elizweni zesikhwama sokuphathisa abasakhulayo enhlelweni zabo zokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngaleyo ndlela kuthuthukisa umnotho welizwe ngokubatholisa imisebenzi.